Muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Masar – Radio Muqdisho
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xirnaa dalka Masar ayaa lagu soo waramayaa in la sii daayay kadib dadaalo ay sii deyntooda u gashay Qaramada Midoobay.
Xabsi ku yaala magaalada Aliskandariya ayaa laga sii daayay 15 Soomaali ah oo ay wehliyaan kuwo kale oo ajaaniba, waxaana sii deynta maxaabiistan gacan ka geeysatay hey’adda qaxootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR.
Qaar ka mid ah maxaabiistaasi oo la hadlay warbinta ayaa xaqiijiyay sii deyntooda, iyagoo sheegay in U.N.-ka uu damaanad kusii daayay dadkaasi, waxeyna muujiyeen sida ay ugu faraxsanyihiin ineey xorriyadooda dib u helaan.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee laga sii daayay xabsiga Aliskandariya oo ka koobnaa 15 ayaa la sheegay in 6 ka mid ah ay ahaayeen haween, kuwaas oo muddo Sadex bilood ah ku jiray xasbigaasi.
Maxaabiis kale oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa weli ku harsan xabsiyada dalkaasi Masar, waxaana socda dadaalo ay UNHCR ku dooneyso sidii ay dadkaasi dib xoriyadooda ugu heli lahaayeen.